YEYINTNGE(CANADA): Friday, June 13
June 11, 2014 at 11:32am
ကနေ့ဗိုလ်သန်းရွှေ ကြိုးကိုင်ထားတဲ့ ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ် စစ်အုပ်စုရဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခိုင်မာပြီး ပြည်သူ တရပ်လုံးအပေါ် ဆက်လက်ကျွန်ပြုထားနိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းချက်များကိုအလိုတူအလိုပါ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အမျိုး သားသစ္စာဖောက် အသားထဲကလောက်မကတဲ့ ဆားထဲကလောက်ကောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးတိုက်ဖျက်ပစ်ရမှာဖြစ် တယ်။
ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုဆက်လက်အာဏာတည်မြဲရေးအတွက် အနီးကပ်ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတာက ကမ္ဘာ့လူ လိမ် နိုင်ငံရေးပွဲစားကြီးဟန်ယောင်ဝေ၊ စားဖားတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်နိုင်ဦး၊ မင်းဇော်ဦး၊ သန့်မြင့်ဦး၊ ဇော်ဦး၊ညိုအုန်းမြင့်၊ အင်ဒရူးငွန်ကျုံးလျံ၊ အောင်သူငြိမ်း၊ ဝင်းမင်း တို့နဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့တူးတူးလေး၊ မန်းငြိမ်း မောင်၊ ရွှေခါး၊ ခွန်ဆိုင်းတို့ဖြစ်ကြပြီး သူတို့အားလုံးဟာ တော်လှန်ရေးသစ္စာဖောက်၊ဒီမိုကရေစီရေးသစ္စာဖောက်၊ တိုင်း ရင်းသားသစ္စာဖောက်၊ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေအပေါ် သစ္စာဖောက်ပြီးဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုနဲ့ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပူးပေါင်းသူတွေဖြစ်တာကို အားလုံးအသိဘဲဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့် ပွဲစားကြီးဟန်ယောင်ဝေ ဆိုရင် ကမ္ဘာ့မွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပေါင်းပြီးရခိုင်အမျိုးသားသာမက ဗမာတနိုင်ငံလုံးကိုရောင်းစားဖို့ ဝန်မလေးဘဲ မျက်နှာမပူ ဘနဖူး သိုက်တူးမယ့်လူဖြစ်တယ်။
နအဖဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတင်းအဓမ္မ အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမို ကရေစီအင်အားစုနဲ့ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ NDF, ENC, DAB, NCUB တို့ကပြတ်သားစွာပယ်ချ လိုက်ကြတယ်။ စားပေါက်ကြီး ကြိုမြင်ထားတဲ့ ဟန်ယောင်ဝေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဒေးဗစ်ထော (သေဆုံး)၊ တူးတူးလေး၊ ရွှေခါး၊ ခွန်ဆိုင်းစတဲ့အုပ်စုဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့NGO တွေဆီကို တိုင်းရင်းသားတွေံ ပါတီထောင်တာပစ်မထားဖို့၊ ကူညီဖို့ လျှို့ဝှက်စာ ဆက်သွယ်လို့ ENC ဖရိုဖရဲကွဲပြဲသွားတယ်။
ကြံ့ဖွတ်စစ်အုပ်စု၂၀၁၀ ခု ဟန်ပြပါတီစုံတည်ဆောက်ရေးနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ပွဲစားကြီးဟန်ယောင်ဝေနဲ့ အပေါင်းအပါတွေဟာကြံ့ဖွတ်အစိုးရနဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ တိုင်းရင်းသားတွေက ပါတီထောင်၊ ကြံ့ဖွတ်နဲ့လက်တွဲဖို့ လှုပ်ရှားလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးဝါရင့်တဲ့ UNA, UNLD ကို မချဉ်းကပ်နိုင်ရှာဘူး။၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင် ဒို့ညီနောင် တိုင်းရင်းသားပါတီတချို့ကို ချဉ်းကပ်နိုင်ပြီး နည်းနည်းပါးပါးအကူအညီပေးထားနိုင်တာကအပကြံ့ဖွတ် စစ်အုပ်စုလိုလားချက်ကို မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဟန်ယောင်ဝေနဲ့အပေါင်းအပါတစုဟာ ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုနဲ့ နားလည်မှုယူပြီး နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ UNFC ကိုချဉ်း ကပ်လာတယ်။ UNFC ကိုဝန်းရံပေးဖိုို့ဆိုပြီး WGEC အလုပ်အဖွဲ့ကို ဖွဲ့လိုက်တယ်။UNFC ကိုဝန်းရံဖို့မဟုတ်ဘဲ UNFC ကို ဖြုတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာ စောစောသိလိုက်လို့UNFC ဟာ WGEC က နှုတ်ထွက်လိုက်တော့ WGEC ဟာ ကျော ထောက်နောက်ခံ (ownership) မရှိဖြစ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့် ပွဲစားကြီး ဟန်ယောင်ဝေဟာ အကြီးအကျယ် မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး WGEC ကို KNU တပိုင်းနဲ့RCSS တို့ကကျောထောက်နောက်ခံပေးဖို့ အရှက်မရှိကြိုးစားပြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ KNU နဲ့RCSS ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဟန်ယောင်ဝေရဲ့ လှည့်ကွက်ကို ကောင်းကောင်းသိကြတဲ့အတွက် တာဝန်ခံပေးဖို့လက်မခံဘဲ လိုင်ဇာကွန်ဖရင့်က ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ NCCT မှာ လက်တွဲပါဝင်ကြတာကြောင့်WGEC ဟာ မြောင်းပုပ်ထဲ ရောက်သွားတယ်။
ဒီနေ့ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုနဲ့ ပွဲစားဟန်ယောင်ဝေတို့အပေါင်းအပါတွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။-
ဒီမိုကရေစီအင်အားစုဖြစ်တဲ့NLD ၊ ၈၈ မျိုးဆက်အဖွဲ့ နဲ့ UNFC လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိရေး၊ UNFC နဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဝသပ၊ မိုင်းလားတို့ကို ခွဲခြားဖြိုခွဲရေး (divide)၊ UNFC အဖွဲ့အတွင်းဖြိုခွဲရေး (fragmentation) အပြင်းအထန် လုပ်နေတယ်။
ဟန်ယောင်ဝေနဲ့အပေါင်းအပါတွေဖြစ်ကြတဲ့ တူးတူးလေး၊ ခွန်ဆိုင်း၊ ရွှေခါး၊ မန်းငြိမ်းမောင်တို့ဟာWGEC မြောင်းပုပ် ထဲ ရောက်သွားကတည်းက UNFC ကို လုံးဝမကျေနပ်ဘဲ ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုနဲ့ခေါင်းချင်းရိုက်ပြီး UNFC နဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေ မညီညွတ်ရေး၊ UNFC ဖြိုခွဲရေး၊UNFC ကို စင်ပြိုင်တိုက်ဖျက်ရေး (rivalry and elimination) တွေ နေ့စဉ်နဲ့ အမျှ လုပ်ဆောင်နေတယ်။
(၁)၂၀၁၄ ခု ဧပြီ ၄-၅ ရက်နေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ဆိုတဲ့နေရာမှာ UNFC နဲ့ တခြားတိုင်းရင်းသားတွေတွေ့ဆုံဆွေး နွေးခဲ့တုံးက တခြားတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဝသပ၊ မိုင်းလား၊ ABSDF,RCSS နဲ့ နာဂအဖွဲ့တွေကို လေ့လာသူ (observer) မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ လေ့လာသူပုံစံမျိုးနဲ့သီးခြားခုံတွေမှာ ထိုင်ခိုင်းလိုက်တာဟာ UNFC က တခြားတိုင်း ရင်းသားတွေကို တန်းတူအဆင့်လက်မခံသလိုမြင်လာအောင် တမင်ဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်။
(၂)ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုနဲ့ ဟန်ယောင်ဝေဂိုဏ်းဟာ UNFC ကို အနီးကပ်အတိုက်အခံလုပ်ဖို့အတွက်ပြည် ထောင်စုအင်စတီကျု ရုံးကို ချင်းမိုင်မှာ ဖွင့်ပြီး မန်နေးဂျင်း ဒါရိုက်တာအဖြစ်ဘိန်းဘုရင်ခွန်ဆာရဲ့ MTA မှာ နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့သူ ရှမ်းသွေးမပါ တရုတ်စစ်စစ်(ရှမ်းစာနဲ့စကားကျွမ်းကျင်သူ) ခွန်ဆိုင်း၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ် တူးတူးလေးနဲ့ရွှေခါးတို့ တာဝန်ယူတဲ့အပြင် ရုံးလုပ်ငန်းတောင်မှ ကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်မှု မရှိသေးဘဲအတွေ့ အကြုံနုနယ်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူငယ် ၁၅ ယောက်ကို တယောက်တလ အနည်းဆုံး ဘတ် ၁၈၀၀၀က ၂၅၀၀၀ အထိ ပေးထားတယ်။ ဒါ့အပြင် (ဖက်ဒရယ်နာမယ်မခံရဲတဲ့) ပြည်ထောင်စု အင်စတီကျု (PyidaungsuInstitute) ရုံးဖွင့်တာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းဌာနတွေမေးတာကို မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာခွန်ဆိုင်းထုတ်ဖော်ပြောတာက သမတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းတို့က ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ ရုံးရှိတယ်၊ တိုင်းရင်း သားတွေမှာ အဲ့လိုရုံးမျိုးမရှိသေးဘူး၊ ဒါ့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစင်တာရုံး လိုအပ်တယ်လို့ခွင့်ပြုသဘောတူတဲ့အတွက် အခုလို ပြည်ထောင်စုအင်စတီကျုရုံး ဖွင့်တာဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြောခဲ့တယ်။တကယ်လို့ သာ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ်လိုချင်ရင် ပြည်ထောင်စုအင်စတီကျုရုံးဟာUNFC အုပ်ချုပ်မှုအောက် မှာ ထားရမှာဖြစ်တယ်။ UNFC ကိုလုံးဝမလိုလားတဲ့ အမျိုးသား သစ္စာဖောက်လောက်ကောင်လက်မှာထားတာဟာ တိုင်းရင်းသားတွေ စုစည်းထားတဲ့ UNFC ကို အနီးကပ်ဖြိုခွဲဖို့ဖြစ်တာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားလွန်းတယ်။
(၃)ကြံ့ဖွတ်စစ်အုပ်စုနဲ့ ပွဲစားဟန်ယောင်ဝေတို့ရဲ့ အစီအစဉ်၊ အကြံဉာဏ်၊ အထောက်အပံ့ အစစအရာရာအကူအညီ နဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်တဲ့ တူးတူးလေးကို ခိုင်းစေပြီး KNU အဖွဲ့ကို ခုတုံးလုပ်၊နိုင်ငံရေးအလွန်အားနည်းတဲ့ KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်မူးတူးနဲ့ အပေါင်းအပါတို့ကို ရုပ်သေးအဖြစ်အသုံးချကာ ဝသပ၊ မိုင်းလားဒေသကို ခရီးစဉ်တခု စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ့ခရီးစဉ်မှာ ဝသပနဲ့တွေ့ဆုံတာ သိတ်ထူးခြားမှု မရှိပေမဲ့ မိုင်းလားအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါ လက်ကိုင်ဒုတ်တူးတူးလေးက UNFC ဟာ ခင်ဗျားတို့နဲ့ ဟိုကိစ္စ ဒီကိစ္စ လာတွေ့တာ လာဆွေးနွေးတာ မရှိဘူးလား ဆိုပြီးထပ်ခါတလဲလဲ တရားခံ မေးသလို မေးနေတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် UNFC ကို ဖျက်ဆီးလိုပြီးUNFC နဲ့ ဝသပ၊ မိုင်းလားတို့ လုံးဝ အဆက် အစပ်မရှိဖို့၊ တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုလုံးဝမလိုလားဘူးဆိုတာ ဘာမှနားမလည်တဲ့ ကလေးတောင် ကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်မှာဖြစ်တယ်။KNU ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြီး ရုပ်ပြရုပ်သေးအဖြစ် ပြသခံနေရတဲ့ ဗိုလ်မူးတူးတို့ကတော့ ဘာတခွန်းမှပြောတာမတွေ့လိုက်ဘူး။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြစ်တဲ့ တူးတူးလေး ကိုတော့ အားလုံးသတိထားပယ်ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ မြေခွေးအမြီးဖြတ်ဖို့ အဖော်ညှိရအောင် သူတို့ကို နောက်ထပ်သွားတွေ့ဆုံခိုင်းလိမ့်ဦးမယ်၊ ဒါကို မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ အထူးသတိပြု ရှောင်ဖယ် ဝိုင်းကြဉ်ဖို့လိုတယ်။
(၄)စစ်အုပ်စုနိုင်ငံရေးပွဲစား ဟန်ယောင်ဝေ၊ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ တူးတူးလေး၊ ရွှေခါး၊မန်းငြိမ်းမောင်၊ ခွန်ဆိုင်းတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှာ KNU လော်ခီးလာ စခန်းကိုသွားပြီး UNFC-NCCT နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မဖြစ် နိုင်ကြောင်း၊ တဖွဲ့ချင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးမှအောင်မြင်မယ့်အကြောင်း၊ KNU အနေနဲ့ လက်ဦးစံပြအဖြစ် လုပ် ဆောင် သွားသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြီးUNFC ဖြိုခွဲရေးအတွက် လုပ်နေတာသိရတယ်။ ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင် ဟန် ယောင်ဝေတို့ ဖက်ဆစ်အလိုတော် ရိတွေဟာအတောမသတ်နိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အရှက်မရှိ အတင်းဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်စုပွဲစားကြီးနဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေကို တိုင်းရင်းသား အင်အားစုအားလုံးက အမြန်ဆုံးတိုက်ဖျက်ကြရမှာဖြစ်တယ်။
(၅)ပွဲစားဟန်ယောင်ဝေရဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ တူးတူးလေး၊ မန်းငြိမ်းမောင်တို့ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ တပြည်ထောင်စနစ် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို တန်းတူရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်စနစ်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရေး၊ ပြည်သူတရပ်လုံးတောင်းဆိုနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအစစ်အမှန်ဖြစ်အောင်နဲ့ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးမှုမရှိအောင်ပြင်ဆင်ရေးကိုလဲ လျစ်လျူရှုပြီး ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုအကြိုက် ခေါင်းငြိမ့်ပေးနေတယ်။၁၀ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ် ရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ (Karen Unity Seminar) ရဲ့ ညီညွတ်ရေး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပကရင်အလွှာစုံပူးပေါင်းလုပ်ဆောင် ရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလဲ ဘေးချိတ်ပြီး ထင်ရာစိုင်းနေတယ်။
(၆) ပွဲစားဟန်ယောင်ဝေ၊ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့တူးတူးလေး၊ ရွှေခါး၊ မန်းငြိမ်းမောင်၊ ခွန်ဆိုင်းတို့ အောင်သွယ် မှုနဲ့ KNU ဥက္ကဌ ဗိုလ်မူးတူးနဲ့အပေါင်းအပါတစု ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ရန်သူ လူသတ်သမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ မင်းအောင်လှိုင်တို့နဲ့၈ ကြိမ်တိုင် ခတ်စိတ်စိတ်သွားတွေ့ရတာကို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစရာလို့ ယူဆရင်တော့ KNU အတွင်းပြဿနာအကြီးအကျယ် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပြင် ကရင်ပြည်သူ အောက်ခြေထုရဲ့ အော့နှလုံးနာ ပစ်ပယ်ခြင်းခံရမှာသေချာတယ်။ ဒါကြောင့် KNU နဲ့ ကရင်ပြည်သူတွေက ရုပ်သေးပြခံနေရတဲ့ ဗိုလ်မူးတူးနဲ့ အပေါင်းအပါများကိုအချိန်မှီ ထိန်းထားရန် လိုအပ်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ နောက်မဆုတ်ရင် ကရင်ပြည်သူ့သမိုင်းတရားခံဖြစ်ရုံမက ဗမာပြည်သူ တရပ်လုံးရဲ့ ပစ်ပယ်ခံကြရမှာသာ ဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြံ့ဖွတ်ဖက်ဆစ်စစ်အုပ်စုအလိုတော်ရိ ပွဲစားဟန်ယောင်ဝေ၊ စားဖားတွေဖြစ်ကြတဲ့ အောင်နိုင်ဦး၊မင်းဇော်ဦး၊ သန့်မြင့်ဦး၊ ဇော်ဦး၊ ညိုအုန်းမြင့်၊ အင်ဒရူး ငွန်ကျုံးလျံ၊ အောင်သူငြိမ်း၊ဝင်းမင်းတို့နဲ့ လက်ကိုင်ဒုတ်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ တူးတူးလေး၊ မန်းငြိမ်းမောင်၊ ရွှေခါး၊ ခွန်ဆိုင်းစတဲ့ စစ်အုပ်စုအလိုတော်ရိ အမျိုးသားသစ္စာဖောက် အသား ထဲကလောက်မကတဲ့ ဆားထဲကလောက်ကောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းတိုက်ဖျက်ဖို့ အချိန်ရောက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/13/20140အကြံပြုခြင်း
ကြိုက်တဲ့နေရာသွား...တရားစွဲ .....ရှင်းပြီလား (ဦးအံ့မောင်)
'' ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီကိစ္စတွေက ၀ိနည်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ သတင်းစာဆရာတွေက ဆုံးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။ အသိအမှတ်လည်း မပြုပါဘူး။ ၀ိနည်းတတ်မှဆိုတာ ၀ိနည်းတော်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ။ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကဆိုတာ လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သိထားရမှာ သံဃာ ၅၀၊ ၁၀၀၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဆရာတော်တွေက တင်မြောက်ထားတာပါ။ ခင်ဗျားတို့က ဒါတွေဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ အကြောင်းအရာတွေက နားလည်တဲ့သူတွေနဲ့ ပြောမှရတာ။ ၀ိနည်းမတတ်တဲ့သူတွေနဲ့ ပြောလို့က တော့ ခင်ဗျားပြောလို့နားလည်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ထင်ရာ ပြောနေမှာပဲ။ ရှင်းချင်ရင် ဦးပညာဝံသကိုယ်တိုင်ရှင်း.....။။
''၀ိနည်းအရဆိုရင် ကျွန်တော်ဝိနည်းအရပြောပါ့မယ်။ အခုပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စဟာ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စသည် သံဃ၀ိနိစ္ဆယ လက်စွဲစာအုပ်ပါ အခန်း (၄)၊ ပုဒ်မ (၂၂) အရ ' ၀ိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းတစ်ခုဖြစ်ပွားလျှင် ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဖွဲ့စည်းထားသော သံဃ၀ိနိစ္ဆယ အဖွဲ့၏ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုသာ ခံယူရမယ်။ အခြားမည်သည့်တရားရုံးမှ တရားမကြောင်းအရ စွဲဆိုခွင့်မရှိစေရ ' လို့ ပြဌာန်းထားတဲ့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက (မဟန) ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ကိုယ့်အမှုကိုယ်ပြန်ဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာ တရားမျှတမှုရှိနိုင်ပါမလား...? လူတွေတရားစီရင်တဲ့အခါမှာ တရားသူကြီးက ကိုယ့်အမှုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာရှိပါတယ် ''
'' နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနယက က ဆုံးဖြတ်တာမမှန်ဘူးလို့ထင်ရင် ခင်ဗျားတို့ ကြိုက်တဲ့နေရာသွား...တရားစွဲ .....ရှင်းပြီလားးးးးးး "
“ပါတီထောင်ပြီး ဘယ်မှတင်စရာမလိုဘဲ ဟောပြောလိုင်စင်ရထားတယ်ဆိုတဲ့ နေမျိုးဝေ ကို စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပုလဲမြို့ ထွေ/အုပ်က ကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးတဲ့ပြင်၊ ရဲဌာနကို ခွင့်ပြုမိန့်မတင်ဘဲ၊ ပုလဲမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ခွင့်ပေးခဲ့သည်။
မင်းတိုင်ပင်ရွာ (ကျွန်တော့် အမေရဲ့ရွာ) က သံဃာတော်တွေ၊ ဒေသခံတွေက ကန့်ကွက်ပြီး ပွဲပိတ်ခဲ့သော်လည်း ကျေးရွာပိုင် အားကစားကွင်းမှာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက နာရီပိုင်းအတွင်း ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုခဲ့ရာကြံ့ဖွံ့ ၃ဝ ခန့် တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကြံ့ဖွံ့နှင့် ထွေ/အုပ်တို့ရဲ့ မလျော်သြဇာသုံး ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကို ရှုတ်ချကန့်ကွက်ကြသည်။ မဘသ နဲ့ ကြံ့ဖွံ့ကို ခုတုံးပြုပြီး၊ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ မပြင်ရေး၊ မဲမပေးရေး ဟောပြောခြင်းအပေါ် ရှုတ်ချကန့်ကွက်သည်။ ရိုးသားစွာ မယှဉ်ပြိုင်ရဲသူတို့ ကောက်ကျစ်မှု စတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မျှဝေပေးပြီး ဆန့်ကျင်ရန်လိုပါသည်။”
• မလျှော်သြဇာသုံးမှုတွေဟာ နေပြည်တော်မှာသာရှိတာမဟုတ်။ မြန်မာပြည်တနံတလျား၊ အလွှာတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်။
• လူတွေထဲမှာ မကြောက်သင့်တာကို ကြောက်နေသူတွေ၊ ငွေနဲ့ အခွင့်အရေးရရင် ကဆိုကတဲ့သူတွေ၊ ချဆို ချတဲ့သူတွေ၊ မြှောက်ပေးရင် မြောက်တဲ့သူတွေ၊ အစိုးရအလုပ်လုပ်နေရရင် အစိုးရပါတီအလိုကျသာလုပ်ရမယ်လို့ အရိုးစွဲနေသူတွေ ရှိနေသေးတယ်။
• မတရားတာကို လက်မခံချင်းသူတွေက ပိုများတာ အားရစရာပါ။ မတရားတာကို ဖီဆန်တာလဲ တာဝန်အရပါ။ အဲလိုလူတွေကိုသာ လေးစား၊ အားထားပါရစေ။ ။
နီပေါမြို့တော်ခတ္တမန္ဒူ လေဆိပ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆို
မဟန နဲ့ သာသနာရေးအတွက် သက်သေ တခု
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နီပေါနိုင်ငံခရီးစဉ်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်
Mr. Sushil Koirala ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ နီပေါနိုင်ငံ၊ ခတ္တမန္ဓူမြို့သိုသွားရောက်ရန်အတွက် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုငရာလေဆိပ်သို၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေနံနက် ၆း၁၅ မနစ်တွင်ရောက်ရှိလာပြီး ၊လေဆိပ်မှ ဒီချုပ်နာယကကြီး ဦးတင်ဦး၊နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးနှင်အဖွဲချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများမှကြိုဆိုကြပြီး ၊
အဖွဲချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင်.အဖွဲ သည် နီပေါနိုင်ငံသိုထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း မှTG 703 ဖြင်.့  နံနက် ၆း၃၀ မိနစ်တွင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှထွက်ခွါပြီးအဆိုပါခရီးစဉ်တွင် နီပေါနိုင်ငံသမ္မတ Rt. Hon. Dr. Ram Baran Yadav, ဝန်ကြီးချုပ် Rt. Hon. Mr. Sushil Koirala တို့နှင့် တွေ့ဆုံမည့်အပြင် နီပေါနိုင်ငံ လွှတ်တော် (Baneshwar) သို့ သွားရောက်လေ့လာကာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Subash Chandra Nembang နှင့်လည်း တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နီပေါနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr. B.P. Koirala နှစ် (၁၀၀) ပြည့်အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခြင်းနှင့် လုမ္ဗနီဥယျာဉ် (Lumbini) သို့သွားရောက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ၁၆၊ ၆၊ ၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါနေ့ညပိုင်းတွင်ရန်ကုန်၊မင်္ဂလာဒုံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ဥက္ကဋ္ဌ (အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်)
၂။ ဒေါက်တာတင်မာအောင် - Chief of staff & Personal assistant to Chairperson
၃။ ဦးဖြိုးဇေယျာသော် - Member of the Parliament & Parliamery Private Secretary
၄။ ဦးမိုးဇော်ဦး - Communication Officer of Chairperson’s Office
တရုတ်ရဲမေများကို ရန်ကုန် စားသောက်ဆိုင်အချို့တွင် စားပွဲထိုး အသွင်ဖြင့်တွေ့နေရ
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်မှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီး ရဲမေအချို့ကို ရန်ကုန်ရှိ စားသောက်ဆိုင်ကြီးများ၌ ညပိုင်းတွင် စားပွဲထိုးများ အသွင်ဖြင့် သုံးယောက်တစ်တွဲ တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသည်ကို မြင်တွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တရုတ်ရဲမေများသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြား ဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာ ဘာသာနှင့် စကားလာရောက် သင်ကြားနေသည့် သူများ ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိတွင် တရုတ် ရဲမေ ၂၉ ဦးသည် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာဘာသာ သင်ကြားလျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အဆိုပါ ရဲမေများ မြန်မာ စကားကို ပိုမို ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်စွမ်းရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ တရုတ် တာဝန်ရှိ သူများနှင့် ရင်းနှီးသော Singapore Kitchenကဲ့သို့ စားသောက်ဆိုင်များတွင် စားပွဲထိုး အဖြစ် ၀င်ရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်စေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း စာသောက်ဆိုင် ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ယင်းရဲမေများသည် စားသောက်ဆိုင်များတွင် အင်္ကျီအပြာနုနှင့် စကတ်အပြာ ရင့်ရောင် ယူနီဖောင်းများ ၀တ်ဆင်ထားလေ့ရှိကြောင်း စားပွဲထိုး အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ ဆိုင်မှ စားပွဲထိုးများကိုသာ သူတို့ သိလိုသည့် မြန်မာစကားများကို မေးမြန်း လေ့ရှိကြောင်း စားပွဲဝိုင်းများမှ အစားအသောက် မှာလျှင် သူတို့က လိုက်လံနားထောင်လေ့ရှိကြောင်း ညနေ ၆နာရီခန့်တွင် လာရောက်ပြီး ည ၉နာရီ ခန့်တွင် ပြန်လေ့ရှိကြောင်း အဆိုပါ စားသောက်ဆိုင်များသို့ သွားရောက် စားသုံးသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
ကြိုက်တဲ့နေရာသွား...တရားစွဲ .....ရှင်းပြီလား (ဦး...
အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နီပေါနိုင်ငံခ...